Madaxweyne Xasan oo booqday safaarada Soomaaliya ee Faransiiska – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo booqday safaarada Soomaaliya ee Faransiiska
15th October 2014 A warsame Af Soomaali 0
Paris: October 15, 2014- Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Xasan Shiikh Maxamuud, iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa talaadadii shalay ka degey magaalada Paris, ka dib markii uu martiqaad ka helay Madaxweynaha Faransiiska, François Hollande.
Labada Madaxweyne waxay ka wada hadli doonaan iskaashiga xiriirka ka dhexeeya labada dal ee dhinacyada Difaaca, Amniga iyo Horumarinta.
Madaxaweyanaha waxaa wafdigiisa ka mid ah, Wasiirka Arrimaha Dibadda, Dr. Cabdiraxman Beyle, Wasiirka Difaaca, Maxamed Shiikh Xaamud, la Taliyaha Madaxweynaha ee Arrimaha Amniga, Cabdiraxman Shiikh Ciise iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweynaha iyo wafdigiisu waxay galabta booqdeen Safaaradda Soomaalida ee magaalada Paris.
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Midowga Yurub, Dr. Cali Siciid Faqi ayaa ku tilmaamay in ay tahay markii ugu horreysay ee Madaxweyne Soomaaliyeed iyo Madaxweynaha Faransiisku ay si rasmi ah isu soo hor fariistaan tan iyo markii ay burburtay Dowladdii Soomaaliya 1991. Taasina waxay muujineysaa isu soo dhowaashaha Soomaaliya iyo Faransiiska iyo sida uu hadda caalamku ugu soo jeestay in uu iskaashi dhinacyo badan leh la sameeyo Soomaaliya.
Heshiiska dowladda Federaalka & Puntland oo lasoo dhaweeyey
Ganacsiga Xamar weyne oo xiran iyo banaan bax looga soo horjeedo Wasaarada Maaliyada oo ka socda